प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहरुख खानका छोरालाई पढाइको चिन्ता लागेपछि … – Sandesh Press
October 7, 2021 121
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई ड्र ग्सको घटनामा पक्राउ गरिएको हो । मुम्बई बाट गोवा जाँदै गरेको क्रुज जहाज मा एक रेव पार्टी भइरहेको थियो । सो पार्टीवाट उनी सहित १६ जना पक्राउ परेका छन् । हिरासतमा रहेका उनलाई अहिले आफ्नो पढाइको चिन्ता लागेको छ ।
अझै केही दिन हिरासतमै बस्नु पर्ने भएपछि उनले त्यहाँ नै आफ्नो अध्ययन गर्नेछन् । त्यसैले उनले प्रहरी मार्फत केही किताव मगाएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार आर्यनले केही साइन्सका किताव मगाएका थिए । उनको माग बमोजिक किताव घरवाट ल्याइदिइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले उपलब्ध गराएका थिए।
जानकारी अनुसार आर्यन खान अन्य आरोपीहरु संगै प्रहरी कार्यालय नजिकैको राष्ट्रिय हिन्दु रेस्टुरेन्ट बाट खाना खाइरहेका छन् । उनलाई घरवाट खाना आउँदैन । कसैलाई पनि एनसीबी कार्यालयमा घरबाट आफ्नो मनपर्ने खाना अर्डर गर्न अनुमति दिइएको छैन। आर्यनलाई पनि अरु सरह यो रेस्टुरेन्टबाट अर्डर गरेर खाना दिइएको छ । उनी अरुसंगै दिनमा दुई पटक खाना खाइरहेका छन् ।
आर्यनको फोन फोरेंसिक अनुसन्धानको लागी पठाइयो
आर्यनलाई क्रूजबाट हिरासतमा लिईएको केही बेर पछि, उनको मोबाइल फोन पनि अधिकारीहरुले लिएका थिए । प्रहरी अधिकारीहरुले व्हाट्सएप च्याटको माध्यम बाट औषधि को बारे मा धेरै महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गरेका छन्। अब अधिक जानकारी प्राप्त गर्न को लागी, आर्यन र अन्य पक्राउ परेकाहरुको मोबाइल फोन देश को सबैभन्दा ठूलो गान्धी नगर मा फोरेंसिक प्रयोगशालामा पठाइएको छ।
Prevदसैंको पहिलो दिन आज घटस्थापना, ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा किन राखिन्छ ?
Next‘गर्भवती’ महिलाले धेरै केरा खाएमा छोरा जन्मिन्छ के यो सत्य हो?
एउटा गरिब बुबाले छोरीले १० कक्षा पास गरेको खुशिमा, एउटा महङ्गो होटेलमा गएछन् मन छुने कथा…